Ụgha​—⁠Otú Ị Ga-esi Emeri n’Ọgụ A Na-alụso Uche Gị
Na-achọ Ezigbo Akụ̀
“Soronụ Ndị Na-akwa Ákwá Kwaa Ákwá”
Gịnị Mere Ị Ga-eji ‘Too Jaa’?
‘Ka O Mezuo Ebumnobi Gị Niile’
Otú Ị Ga-esi Emeri n’Ọgụ A Na-alụso Uche Gị
Ụlọ Nche (Nke A Na-amụ Amụ) | Julaị 2017
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Amis Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Boulou Bulgarian Cakchiquel (Western) Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Digor Douala Dutch Edo Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Jula Kabiye Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mam Mambwe-Lungu Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mingrelian Mixe Mongolian Moore Motu Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Nigerian Pidgin Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urhobo Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
E NWERE ọgụ a na-alụso gị. Ọ bụ Ekwensu na-alụso gị ọgụ a. Ị̀ ma ngwá agha o ji alụso gị ya? Ọ bụ ụgha. Ebe o lekwasịrị anya abụghị ahụ́ gị, kama ọ bụ uche gị.
Pọl onyeozi ma na ụgha Setan na-agha na-akpata ezigbo nsogbu. Ma, ụfọdụ Ndị Kraịst ibe ya aghọtaghị ya otú ahụ. Dị ka ihe atụ, ọ dị ka ụfọdụ ndị nọ na Kọrịnt nọ na-eche na otú ụkwụ si sie ha ike n’ọgbakọ mere na o nweghị ihe ga-emeli ka ha daa. (1 Kọr. 10:12) Ọ bụ ya mere Pọl ji dọọ ha aka ná ntị, sị: “Egwu na-atụ m na e nwere ike merụọ obi unu, o wee ghara izi ezi, gharakwa ịdị ọcha dị ka o kwesịrị Kraịst, dị ka agwọ ahụ ji aghụghọ ya rafuo Iv.”​—⁠2 Kọr. 11:⁠3.
Ihe a Pọl kwuru gosiri na anyị ekwesịghị ịna-eme ka ànyị bụ anwụ anwụ. Ọ bụrụ na ị ga-emeri n’ọgụ Ekwensu na-alụso uche gị, i kwesịrị ịghọta nsogbu ụgha ya nwere ike ịkpata, gbakwaara ya ọsọ.
GỊNỊ MERE ỤGHA JI DỊ NJỌ?
A na-eji ụgha aghọgbu ndị mmadụ ma ọ bụ jiri ya mee ka ha gbanwee ihe ha na-eche na ihe ha na-eme. Otu akwụkwọ kwuru na ụgha bụ ihe e kwesịrị ịgbara ọsọ, na ọ na-akpata nsogbu, nakwa na ọ dịtụdịghị mma.​—⁠Akwụkwọ bụ́ Propaganda and Persuasion.
Gịnị mere ụgha ji dị njọ? Ọ bụ n’ihi na ọ na-eji nwayọọ nwayọọ aba mmadụ n’obi. Onye ahụ agadịghị amata na a ghọgbuwela ya. E nwere ike iji ya tụnyere ikuku ọjọọ a na-anaghị ahụ anya, nke a na-anaghịkwa anụ ísì ya. Ọ bụ ihe mere Vance Packard, bụ́ ọkachamara n’ihe gbasara àgwà ndị mmadụ, ji kwuo na e nwere ike iji ụgha mee ka anyị mewe ihe ụfọdụ, ma anyị agaghị ama na a ghọgbuola anyị. Otu ọkà mmụta kwuru na e jirila ụgha mee ka ụfọdụ ndị mee ihe ndị jọgburu onwe ha, dị ka ‘igbukpọ ndị agbụrụ ọzọ, ịlụ agha, imesi ndị ọzọ ike n’ihi okpukpe ha, agbụrụ ha ma ọ bụ ebe ha si nakwa omume ndị ọzọ na-enweghị isi na ọdụ.’​—⁠Akwụkwọ bụ́ Easily Led​—⁠A History of Propaganda.
Ebe ọ bụ na ndị mmadụ efu nwere ike iji ụgha duhie anyị, chezienụ ihe Setan nwere ike ime. Ọ mụọla àgwà ndị mmadụ kemgbe Chineke kere ha. “Ụwa dum” dị n’aka ya ugbu a. O nwere ike iji ihe ọ bụla dị n’ụwa mee ka ụgha ya ruo ebe niile. (1 Jọn 5:19; Jọn 8:44) Otú Setan si eme ka ‘uche ndị mmadụ kpuo ìsì’ emeela ka ọ ‘na-eduhie elu ụwa dum mmadụ bi.’ (2 Kọr. 4:4; Mkpu. 12:⁠9) Gịnị ka ị ga-eme ka Setan ghara iji ụgha ya nweta gị?
MEE KA OKWUKWE GỊ SIE IKE
Jizọs kwuru ihe anyị ga-eme iji lụso ụgha Setan ọgụ. Ọ sịrị: ‘Unu ga-amara eziokwu ahụ, eziokwu ahụ ga-emekwa ka unu nwere onwe unu.’ (Jọn 8:​31, 32) Agha daa, ihe mbụ na-ala ka naị bụ eziokwu. N’ihi ya, i kwesịrị ime ihe onye agha nọ n’ọgbọ agha na-eme, ya bụ, ịmata ebe ọ ga-esi na-enweta ozi bụ́ eziokwu, nke e nwere ike ịtụkwasị obi, ka ndị iro ghara ịghọgbu ya. Jehova ji Baịbụl emere anyị ụdị ihe ahụ. Ọ bụ ebe ahụ ka ị ga-ahụ ihe niile ga-enyere gị aka ịlụso ụgha Setan ọgụ.​—⁠2 Tim. 3:​16, 17.
O doro anya na Setan, bụ́ Nna ụgha, ma ihe a. Ọ bụ ihe mere o ji eji ụwa ochie a eme ka ndị mmadụ ghara inwe ohere ịgụ Baịbụl na ịmụ ya. Ekwela ka ọ ghọgbuo gị. (Efe. 6:11) ‘Nwee ike iji uche gị ghọta’ ihe niile gbasara eziokwu. (Efe. 3:18) Ọ pụtara na ị ga-agbalịsi ike. Ma, cheta eziokwu gbara ọkpụrụkpụ Noam Chomsky, bụ́ otu nwoke dere akwụkwọ, kwuru. Ọ sịrị: “O nweghị onye ga-egbuwa gị isi, kponye eziokwu n’ụbụrụ gị. Ọ bụ gị ga-eji aka gị chọpụta nke bụ́ eziokwu.” N’ihi ya, ‘jiri aka gị chọpụta’ nke bụ́ eziokwu. Otú ị ga-esi eme ya bụ ịgbalịsi ike “na-enyocha Akwụkwọ Nsọ nke ọma kwa ụbọchị.”​—⁠Ọrụ 17:⁠11.
Ọ bụrụ na ị chọrọ imeri n’ọgụ Setan na-alụso uche gị, i kwesịrị ịmata nsogbu ụgha ya ga-akpata ma gbaara ya ọsọ
Echefula na Setan achọghị ka ị na-echebara ihe echiche nke ọma ma ghọta nke bụ́ eziokwu. N’ihi gịnị? Ọ bụ n’ihi ihe otu akwụkwọ kwuru. Ọ sịrị na ihe nwere ike ime ka ndị mmadụ kweta ụgha a ghaara ha bụ ma e mee ka ha ghara ichebara ihe a gwara ha echiche nke ọma. (Akwụkwọ bụ́ Media and Society in the Twentieth Century) N’ihi ya, ekwetala ihe ọ bụla ị nụrụ n’ebughị ụzọ chebara ya echiche nke ọma. (Ilu 14:15) Jiri “ikike iche echiche” Chineke nyere gị chebara eziokwu Baịbụl echiche ka okwukwe gị sie ike.​—⁠Ilu 2:​10-15; Rom 12:​1, 2.
EKWELA KA IHE Ọ BỤLA MEE KA GỊ NA ỤMỤNNA GHARA ỊDỊ N’OTU
E jiri ụgha kọjuo ndị agha isi, ha nwere ike ịtụwa ụjọ, ike ịlụ ọgụ agaghịzi adị ha. O nwedịrị ike ime ka ha lụsowa ndị òtù ha ọgụ ma ọ bụ hapụ ndị ibe ha gaa nọrọ iche. Otu ọchịagha ndị Jamanị kwuru na ihe so mee ka e merie ha n’Agha Ụwa Mbụ bụ na ndị iro ha ji ụgha megharịa ha anya otú ahụ agwọ si enweta òké. Setan na-eji ụdị aghụghọ ahụ eme ka ọgbakọ ghara ịdị n’otu. Dị ka ihe atụ, o nwere ike ime ka nwanna na nwanna sewe okwu ma ọ bụ mee ka ha hapụ nzukọ Jehova n’ihi na ha chere na ihe e mere n’ọgbakọ adịghị mma.
Ekwela ka Setan duhie gị. Kwe ka Okwu Chineke na-eduzi gị. Dị ka ihe atụ, n’ihe gbasara anyị na ụmụnna anyị ịdị n’otu, Baịbụl gwara anyị ka anyị ‘na-agbaghara ibe anyị kpamkpam,’ na-edozikwa esemokwu n’egbughị oge. (Kọl. 3:​13, 14; Mat. 5:​23, 24) Ọ dọsiri anyị aka ná ntị ike ka anyị ghara ịhapụ ọgbakọ. (Ilu 18:⁠1) Chọpụta ma ị̀ na-agbalịsi ike ịlụso ụgha Setan ọgụ. Jụọ onwe gị, sị: ‘Mgbe nwanna kpasuru m iwe n’oge gara aga, ònye ka m mere ihe dị ya mma? Ọ̀ bụ Jehova, ka ọ̀ bụ Setan?’​—⁠Gal. 5:​16-26; Efe. 2:​2, 3.
EKWELA KA IHE Ọ BỤLA MEE KA Ị GHARA ỊTỤKWASỊ NZUKỌ JEHOVA OBI
Onye agha na-atụkwasịghị onyeisi ha obi agaghị eji obi ya niile na-alụ agha. N’ihi ya, ndị iro na-eji ụgha eme ka ndị agha ghara ịtụkwasị onyeisi ha obi. Ha nwere ike ịna-asị ha: “Unu agaghị atụkwasịli ndị isi unu obi,” nakwa “Unu ekwela ka ha mee ka unu baa ná nsogbu.” Iji mee ka ha kweta ihe ha na-ekwu, ha nwere ike iji aghụghọ kwuwe banyere ihe ndị isi mejọrọ. Setan na-eme ụdị ihe a. Ike anaghị agwụ ya ná mbọ ọ na-agba ka ị ghara ịtụkwasị ndị Jehova ji eduzi nzukọ ya obi.
Gịnị ka ị ga-eme ka ọ ghara iduhie gị? Kpebisie ike ịnọsi ike ná nzukọ Jehova, jirikwa obi gị niile na-akwado ndị o ji eduzi nzukọ ya n’agbanyeghị na ha ezughị okè. (1 Tesa. 5:​12, 13) Ndị si n’ezi ofufe dapụ ma ọ bụ ndị nduhie ndị ọzọ kwuwe okwu ọjọọ gbasara ọgbakọ iji megharịa gị anya, ekwela ka ha ‘mee ka ị maa jijiji ọsọ ọsọ wee bụrụ onye na-enweghị uche,’ a sịgodị na ihe ha na-ekwu yiri eziokwu. (2 Tesa. 2:2; Taị. 1:10) Mee ihe Pọl gwara Timoti ka o mee. Jidesie eziokwu ị mụtara ike. Echefukwala ebe ị mụtara ya. (2 Tim. 3:​14, 15) N’eziokwu, e nwere ọtụtụ ihe gosiri na i kwesịrị ịtụkwasị ndị Jehova si n’aka ha na-akụziri anyị eziokwu obi. O ji ha na-arụ ọrụ kemgbe ihe fọrọ obere ka o ruo otu narị afọ.​—⁠Mat. 24:​45-47; Hib. 13:​7, 17.
EKWELA KA E JIRI ỤJỌ MEE KA Ị DAA MBÀ
Chetakwa na ọ bụghị mgbe niile ka Setan na-eji nwayọọ nwayọọ achọ inweta anyị. Mgbe ụfọdụ, ọ na-eji iyi egwu. Akwụkwọ ahụ kwuru gbasara otú ụgha si malite kwuru na iyi egwu so n’otú e si eduhie ndị mmadụ kemgbe ụwa. Dị ka ihe atụ, otu ọkachamara ndị Briten aha ya bụ Philip M. Taylor kwuru na ndị Asiria na-eji iyi egwu na ụgha eme ka ndị iro ha chịliere ha aka elu. Setan ga na-agbalị iji egwu mmadụ, ụjọ ọnwụ, ma ọ bụ ịtụ ụjọ ka a ghara ịkpagbu gị mee ka ị kwụsị ife Jehova.​—⁠Aịza. 8:12; Jere. 42:11; Hib. 2:⁠15.
Ekwela ka egwu Setan na-eyi gị mee ka ị daa mbà ma ọ bụ mee ka ị ghara ịna-erubere Jehova isi. Jizọs sịrị: “Unu atụla egwu ndị na-egbu ahụ́, mgbe ha mesịrị nke a, ha enweghị ike ime ihe ọ bụla ọzọ.” (Luk 12:⁠4) Ka obi sie gị ezigbo ike na Jehova ga-emezu nkwa o kwere na ọ ga-elekọta gị ma nye gị “ike karịrị ike nkịtị,” nakwa na ọ ga-enyere gị aka ka ị ghara ịchịliri Setan aka elu n’ihi egwu ọ na-eyi gị.​—⁠2 Kọr. 4:​7-9; 1 Pita 3:⁠14.
O doro anya na e nwere mgbe ụjọ ga-ejide gị ma ọ bụ ike agwụwa gị. Ma, cheta ihe Jehova gwara Jọshụa. Ọ sịrị ya: “Nwee obi ike, dịkwa ike. Amala jijiji, atụkwala ụjọ, n’ihi na Jehova bụ́ Chineke gị nọnyeere gị ebe ọ bụla ị na-aga.” (Jọsh. 1:⁠9) E nwee ihe na-echegbu gị, kọọrọ ya Jehova ozugbo n’ekpere. Ka obi sie gị ike na ‘udo nke Chineke ga-eche obi gị na ike iche echiche gị nche’ ka i nwee ike ịgbara ụgha Setan niile ọsọ.​—⁠Fil. 4:​6, 7, 13.
Ì chetara ụgha Rabshake, bụ́ onye ozi eze Asiria, ji na-eyi ndị Chineke egwu? Ihe okwu ya pụtara bụ, ‘O nweghị ihe ga-eme ka ndị Asiria ghara ịgba unu ose n’anya. Chineke unu, bụ́ Jehova, agaghị anapụtali unu.’ Ọ katara obi kwuo, sị: ‘Ọ bụ Jehova gwara anyị bịa bibie obodo a.’ Gịnị ka Jehova zara ndị ya? Ọ sịrị ha: “Atụla egwu n’ihi okwu ị nụrụ, nke ndị na-ejere eze Asiria ozi kwuru iji kwutọọ m.” (2 Eze 18:​22-25; 19:⁠6) O dunyere otu mmụọ ozi, ya agaa gbuo otu narị puku ndị agha Asiria, na puku iri asatọ na ise n’otu abalị.​—⁠2 Eze 19:⁠35.
MARA IHE, NA-EGE JEHOVA NTỊ
Ò nwetụla mgbe ị na-ele fim, hụ ebe a na-aghọgbu mmadụ, ma onye ahụ amataghị? Gị anọrọ ebe ị nọ na-asị ya, ‘Ekwetala. Ha na-aghara gị ụgha.’ Chezienụ otú ndị mmụọ ozi si na-asị gị, “Ekwela ka Setan jiri ụgha ya ghọgbuo gị.”
N’ihi ya, egela ntị n’ụgha Setan. (Ilu 26:​24, 25) Na-ege Jehova ntị, tụkwasịkwa ya obi n’ihe niile ị na-eme. (Ilu 3:​5-7) Mee ihe ọ na-agwa gị, ya bụ: “Mara ihe, nwa m, wee mee ka obi m ṅụrịa.” (Ilu 27:11) I mee otú ahụ, ị ga-emeri n’ọgụ Setan na-alụso uche gị.
ỤLỌ NCHE (NKE A NA-AMỤ AMỤ) Julaị 2017